विज्ञान प्रविधि Archives - Page2of 20 - Vishwa News
काठमाडौं । आइतबारदेखि केही दिन ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । यसले बाढी र पहिरोको जोखिम निम्त्याउने भन्दै तटीय क्षेत्र तथा भिरालो जमिन आसपास घर भएकालाई उच्च सतर्कता अपनाउन मौसमविद्ले सुझाव दिएका छन् । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक
काठमाडौंको स्थानीय समुदायमा कोरोना नफैलिएको सरकारको निष्कर्ष
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा समुदायस्तरमा कोरोना नफैलिएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएको हो । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा बढी भिडभाड हुने विभिन्न स्थानबाट नमुना संकलन भएको थियो । कुल ४ हजार ८
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार विस्तृतमा »
काठमाडौं । बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्याएको अघिल्लो साताको तुलनामा आगामी केही दिन वर्षा कम हुने भएको छ । अबको केही दिन ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविको प्रक्षेपण रहेको छ । अघिल्लो बिहीबारदेखि सक्रिय मनसुन मंगलबारबाट केही कमजोर बनेको
नेपालमा कोरोना संक्रमित डिस्चार्जमा रेकर्ड ब्रेक, कसरी सम्भव भयो ?
काठमाडौं । संसारमा कोरोना महामारीले मानिसको स्वास्थ्य अवस्थालाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ । धेरैजसो विकसित मुलुकले मानिसको ज्यान बचाउन ठूलो संघर्ष गर्नु परेको छ । त्यसको ठिक विपरित कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएपनि नेपालमा भने कोरोनाको प्रभाव कमजोर देखिएको छ ।
चितवन । चितवनमा अवैध मृगौला प्रत्यारोपण गरेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ परेका छन् । चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) भरतपुरका चार चिकित्सकसहित ६ जना पक्राउ परेका छन । एक वर्ष अगाडी प्रत्यारोपण गरिएको एक मृगौला अवैध भएको
काठमाडौं । नेपालमा सलहको अर्को झुण्ड छिर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुर र इटावाको बीचमा पर्ने औरैया आसपासमा सलहका दुई झुण्ड रहेको र यी झुण्ड नेपाल छिर्ने सम्भावना रहेको सरकारले बताएको छ । दुई झुण्डले करिब
काठमाडौं । नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानलको प्रसारण बन्द भएको छ । विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) हरुले भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा प्रसारण नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । बिहीबार साँझबाटै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । च्यानल वितरकहरुले
काठमाडौं । आजदेखि नेपालमा चार दिनसम्म लगातार पानी पर्ने भएको छ । सोहीकारण सचेत रहन गृह मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तरर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चार दिनसम्म ठूलो पानी पर्ने भएकाले बाढी, पहिरो
विज्ञ भन्छन् : जंगली जनावरलाई मारिरहे मानिस अझ खतरनाक संक्रमणको शिकार हुनुपर्छ
काठमाडौं । जंगली जनावरलाई मारिरहेमा मानिसले कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरनाक प्रकृतिका भाइरसको शिकार हुनुपर्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका विशेषज्ञले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । मानिसले जंगली जनावरको ज्यान लिने र उनीहरुलाई उत्पीडन गरिरहे अझ बढी खतरनाक
काठमाडौं । केही दिन अगाडी एक गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको ढलमा कोरोना भाइरसको नुमना भेटियो । यो खबरले सरकारलाई झस्काएको छ । कतै समुदायमा कोरोना त फैलिएन ? सोहीअनुसार सरकारले अब समुदायमा कोरोना परीक्षणको दायरा बिस्तार गर्न
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी हालेर सफल परीक्षण गरिएको छ । आइतबार २६ किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी छाडिएको हो । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने बहुप्रतिक्षित यो आयोजना अब भने अन्तिम चरणमा पुगेको दावी सरकारले गरेको
काठमाडौं । भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवधि ६ महिना पर सरेको छ । अब यो विमानस्थल आगामी डिसेम्बरसम्म सक्ने गरी समयावधी थप भएको हो । यसअघि ३० जुन २०२० मा निर्माण सक्ने लक्ष्य यस विमानस्थल आयोजनाको थियो
काठमाडौं । अब नेपालमा निजी प्रयोगशालाबाट समेत कोरोना परीक्षण हुने भएको छ । सरकारी प्रयोगशालालाले नमुनाको चाप धान्न नसकेपछि निजीमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले तीन निजी प्रयोगशालालाई पिसिआर विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षणको
नेपालका २४ जिल्लामा सलहको आक्रमण, मंगलबार उपत्यकामा छिर्यो
काठमाडौं । नेपालका २४ जिल्लामा सलह पुगेको छ । मंगलबार दिउसोसम्मको तथ्याक अनुसार २४ जिल्लामा सलह पुगेको रिर्पोटिंग भएको छ । प्लान्ट क्वरेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा समेत सलह देखिएको छ । मंगलबार उपत्यकामा सानो झुन्ड